Ikhaya leSmart | Ulwazi malunga nenkampani Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd., izabelo zokutshintshana Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Thermopile Infrared Ubushushu woluvo isicelo Smart Ekhaya
Isixhobo somoya okrelekrele usebenzisa isivamvo se-infrared thermopile sahlukile kwimoya yesiqhelo yomoya. Inzwa ingasetyenziselwa ukukhangela ukuba ngaba ukhona umthombo wobushushu kwindawo yoqheliso, ukuze kulawulwe ulwalathiso lomoya kunye nevolumu yomoya ngokwendlela eyiyo
Ukusetyenziswa kweenzwa ze-infrared thermopile kwisikhenkcisi, kunokufezekisa umlinganiso wobushushu obuchanekileyo, kuneempawu zokuphendula ngokukhawuleza, kunokubonelela ngendawo efanelekileyo yokugcina ukutya kwifriji.
Isipheki sokungenisa isixhobo esine-infrared thermopile sensor sinokulinganisa ubushushu ngokuchanekileyo, esinokusombulula ingxaki yokuba isiko lokungeniswa kwendabuko alinakulungelelanisa ngokuzenzekelayo ubushushu bokufudumeza ngokobushushu obumiselweyo, kwaye alunakufezekisa ulawulo lobushushu oluchanekileyo, olukhokelela kwinkunkuma yamandla kunye nomlilo kubangelwa lula kukutsha.
I-oveni ye-microwave ekrelekrele ene-infrared thermopile sensor yahlukile kwi-oven yemicrowave yendabuko. Inokuhlengahlengisa amandla e-microwave ngokulinganisa ubushushu bokutya ngexesha lokwenyani, ukuze kufezekiswe ukusebenza okuphezulu kunye nokugcina amandla, kunye nokuqinisekisa ukuba ukutya kunencasa ngakumbi.
Iketile yombane ekrelekrele ene-infrared thermopile sensor yahlukile kwiketile yombane yemveli. Inokulinganisa ubushushu obuchanekileyo beketile ngexesha lokwenyani, kuthintele ukutshisa okomileyo, kwaye ugcine amandla ngokufudumeza okunengqondo.
Umatshini wokuphefumla wasekhitshini
I-ventilator ekhaliphileyo yasekhitshini ene-infrared thermopile sensor yahlukile kwinto yokuphefumla yendabuko ekhitshini. Ngokulinganisa ubushushu be-boiler ngexesha lokwenyani, ifeni ilawulwa ukuphucula inqanaba lokufunxwa komlilo weoyile kunye nokugcina amandla ngokufanelekileyo.